Col. Shaati Guduud oo ku mashquulsan qalabaynta ciidamadiisa
Madaxweynaha dawlad goboleedka K/galbeed Soomaaliya Md. Shaati Guduud ayaa lagu soo waramayaa inuu imminka aad ugu mashquulsan yahay sidii uu u samayn lahaa ciidan balaaran oo waliba ku hubaysan gawaarida gaashaaman ee loo yaqaan Tiknikada, maadaama ay hubkii RRA ee u badnaa Tiknikada ay gacanta ugu jirto labada nin ee ay hadda iska soo horjeedaan.
Wararkan oo laga helay dad Baydhabo ku sugan ayaa xaqiijiyay inay indhahooda ku arkeen baabuur Tikniko ah, dhex meeraysanaya magaalada dhexdeeda.
Diyaar garawga uu Col. Shaati Guduud samaynayo ayaa lagu soo waramayaa inuu salka ku hayo culays la sheegay inuu uga imaanayo dhinaca Sh. Aadan Madoobe Iyo Xaabsade oo iyaguna ciidamo ku uruursanaya Diinsoor.
Wafdi uu hogaaminayay Daahir Dayax oo Doraad Lagu Rasaaseeyey Afgooye
iyo C/Qaasim oo Maanta Tegey Afgooye isagoo uu lasocdo Daahir Dayax
Wafdi uu hogaaminayay Daahir Dayax oo ah wasiirka arimaha Dibadda ee dawladda KMG, ayaa rasaas ooda looga qaaday xilli ay ku jireen shir ay ku gorfeynayeen sidii maamul loogu samayn lahaa degmada Afgooye, maalinimadii doraad.
Lama soo sheegin wax dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay halkaas, hase ahaatee waxaa hakad galay sii socoshada kulankii iyadoo ugu dambaytiina lagu kala tegay shirkii.
Dablayda wax xabadaysay ayaa lagu soo waramayaa inay diidan yihiin maamulka ay dawladda KMG ahi doonayso inay ka samayso Afgooye.
Dhinaca kale, guddomiyaha degmada Afgooye Xuseen Cali Weheliye Cirfo ayaa maanta shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigeen dablaydii ka danbaysay rasaastii lala beegsaday goobtii shirku ka soconayay. Xilligaas oo uu halkaas ku sugnaa Daahir Dayax, wasiirka arimaha Dibadda ee dawladda KMG.
Sidoo kale wuxuu Md. Cirfo ka bixiyey raali galin falkii dhacay, wuxuuna sheegay in dadka ku dhaqan Afgooye ay taageersan yihiin dawladda KMG ah, ayna raali ka yihiin in maamul loo sameeyo.
Maanta ayay Markale dib ugu laabteen degmada Afgooye waftigii oo uu markaan la socdey madaxweynaha DKG , C/Qaasim Salad Xasan, waxaa kale oo waftigaas maanta la socdey Daahir Dayax, waxaana warku sheegay inay halkaas mar kale dib uga bilaabeen kulankoodii, waxaana la isku afgartay in muddo sadex cisho ah lagu soo dhiso maamulka degmada Afgooye.
Muqdisho Oo dhawaan laga taaba galiyey machad bixinaya (IT) Information Technology
Machad lagu magacaabo Beder Institute Of Information Technology BITT ayaa dhawaan laga furay magaalada Muqdisho, machadkaas oo ah kii ugu horeeyey ee bixiya maadooyinka Programming iyo webpage designing, ayaa u muuqda imminka in dadka reer Muqdisho ay aad u xiisaynayaan.
Mar aan booqday xarunta machadka ayaan ku arkay arday fara badan oo dhiganaysa iyo kuwo kale oo doonaya inay is diiwaan galiyaan. Waxaan halkaa ku arkay macalin ajanabi ah oo bixinaya maadooyinka Programming-ka, mar aan weydiiyey mid ka mida hawl wadeenada machada, su’aal ahayd sababta keentay in loo baahdo macalimiin ajanabi ayaa ii sheegay in ilaa iyo hadda aysan jirin macalimiin Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho oo bixin kara maadooyinka uu dhigayo macalinkan ajanabiga ah
Maamulaha machadka Beder Md. Salaad Khaliif oo faahfaahin iga siinayay machadka Beder ayaa sheegay, in machadkoodu wax weyn ku soo kordhin doono aqoonta dadka reer Muqdisho gaar ahaan, iyo guud ahaan tan dalka oo dhan, maamulaha ayaa sheegay, inay ku talo jiraan inay gaarsiiyaan machadkooda ilaa gobolada dalka mustaqbalka soo socda.
Maamule Salaad Khaliif, ayaa sheegay in macalimiinta wax ka dhigaysa machadkoodu ay yihiin kuwo tayo leh oo ay hubiyeen heerkooda aqooneed, ayna haystaan aqoonsi caalami ah, isla markaana ardaygii ka baxa machadkooda uu heli doono Diploma laga aqoonsayahay dunida meelo ka mida, wuxuu maamuluhu intaa ku daray in ay u samaynayaan shariikadaha barnaamijyo khaas ah oo ku wajahan hawl maalmeedkooda (Project), wuxuuna sheegay maamuluhu inay bixinayaan maadooyinka ay ka mid yihiin:
-Visual c++ 6.0
-Web designing (HTML, DHTML, CSS, JSSS, Java Script, Perl (CGI)
-XML (Extensible Markup Language) with XSL
-Networking Essential with Hardware Basics
-Windows 2000 Administration
-CISCO (Routers and Switches)
-UNIX Administration &amp; Shell Programming
-Linux Administration &amp; shell programming
-SUN-SOLARIS Administration &amp; shell programming
-Date base Administration (DBA) – for Oracle
-Ms-Office 2002 (Ms-Word, ms-Excel, Ms-Access, Ms-Power point )
-Computer Basics (DOS &amp; Windows)
-Quick Books Pro 2001
iyo waliba kuwa kale oo fara badan, waxaana la rajaynayaa in dhowaan machadka ay soo gaario doonaan macalimiin kale oo ajanabi ah oo iyaguna wax ka bixin doona casharada ka baxaya machadka BITT.
Isbahaysiga Dooxadda Jubba oo Cashuur
ka bilaabay Kismaayo iyo Md. Deerow oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho oo uu... GUJI... 17/9
DOODFURAN: DADWEYNAHA & CASHUURTA KISMAAYO